प्रगतिशील लेखक संघमा के कारण देखियो विवाद ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
प्रगतिशील लेखक संघमा के कारण देखियो विवाद !
२०७५ चैत १८ सोमवार
काठमाडौं । एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको प्रगतिशील लेखक संघमा विवाद देखिएको छ । केही पदाधिकारी र सल्लाहकारले सम्मेलन बहिष्कार गर्ने जनाएपछि विवाद देखिएको हो । संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेल, महासचिव आरएम डंगोलले विज्ञप्ति निकाली संस्थाबाट अलग हुने घोषणा गरेकाले आरोपमा आधार नभएको जिकिर गर्दै प्रलेसमा कुनै विभाजन नआएको स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रलेसको एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलन यही चैत २२ र २३ गते काठमाडौँमा हुँदैछ । २००९ सालमा श्यामप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा स्थापित बनेको सो संस्था वामपन्थी स्रष्टाहरुको साझा मोर्चा मानिन्छ । कुनै बेला प्रलेसमा कमलमणि दीक्षित, धर्मराज थापा, कृष्णचन्दसिंह प्रधान, गोकुल जोशी जस्ता स्रष्टा थिए । रमेश विकल, गोविन्द भट्ट, आनन्ददेव भट्ट, निनु चापागाईं, घनश्याम ढकाल र अमर गिरीले संस्थाको नेतृत्व लिइसकेका छन् ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र भूमण्डलीकृत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद–विरुद्धको मूल एजेण्डामा एकै ठाउँमा उभिएर जान सकिने भन्दै हालै सम्पन्न प्रलेस काठमाडौं सम्मेलन वैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ । प्रलेसले मातृभाषा विभाग खडा गरे पनि जिम्मेवारी लिनेहरुले उचित काम नगरी तिनैले नेतृत्वमा आक्षेप लगाइनु औचित्यहीन भएको जनाइएको छ ।